Lelee GIF Email a dị Mma nke GIF sitere na Netflix | Martech Zone
Lelee Email GIF a na-akpali akpali nke si na Netflix
Fraịdee, Nọvemba 17, 2017 Douglas Karr
N'ọtụtụ n'ime usoro izizi email kachasị mma m gụrụ, ndị ọkachamara na-egbochikarị ndị na-ere ahịa email ka ha ghara ịmepụta ozi ịntanetị na otu onyonyo. Enwetụbeghị mgbe m nwere mmasị na iwu dịka nke a, mgbe m na-eche na ịnwale usoro dị iche iche bara uru maka ule ahụ.
Naanị taa, enwetara m ozi email a dị egwu site na Netflix. O nwere isiokwu:
Ọrụ enyo █████ juru na Netflix on
Mgbe imeghe email, ọ bụ otu ozi na-egosi naanị ịbụ ọkwa sitere na Netflix… mana chere.
Ozugbo m hụrụ na ọ na-egbukepụ egbukepụ, ha nwere m. Ee ee… M pịrị ma kpọnye vidiyo ahụ The Punisher. Ee ee, m ga-elele ya ugbu a. Onye na-ahụghị Frank Castle n’anya?
Tags: email email na-aga n'ihuanimation gifgifNetflix
Pixelz: Ọrụ Ntughari Foto maka E-Commerce